Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 10/01/2020)
suxuunta Rice, bur saliid, rootida, duub guga - aad u magacaabi, ay tahay oo dhan on menu iyo dhadhankiisu sida dhab ah sida haddii aad ku jirtay Shiinaha. Taasi waxa la filayaa mid ka mid ah maqaayadaha ugu fiican Chinese in Europe. Haddii aad doonayso inaad hesho in ay Amsterdam tareen, aad awoodid qaadi tareenku ka Paris a, Berlin, iyo kuwa kale magaalooyinka Yurub.
Tixraacaan Du Dragon waa dabcan ka mid ah Makhaayadaha Shiinaha ee Europe - Brussels, Belgium
makhaayad kale faanaa a gudaha fantastic oo design beerta garab suxuuntiisa cajiib ah, Tixraacaan Du Dragon ee Brussels waxaa la yiraahdaa kasbatay mid ka mid ah maqaayadaha ugu fiican Chinese in Europe. Iyadoo in ka badan 300 kuraasta iyo beer ah ornamental fiican, aad dareento doonaa sida aad ku socday galay riyo bariga habboon. saxan kasta waa ku yaab, laakiin waxaan doonayaa in aan dib farmuuqay wadarta arag darnaayeen oo guriga qaas ah, Bekiin duck, sida laba wax oo waa in aad isku daydo haddii aad tahay booqashada Brussels tareen.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-chinese-restaurants-europe/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)